Betsaka ireo tsy mahalala ny zony ka mijoro ny Ong Miaro Ny Zo Mahaolona - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Betsaka ireo tsy mahalala ny zony ka mijoro ny Ong Miaro Ny Zo Mahaolona
Nampahafantatra ny fisiany sy ireo asa ataony ny Ong Miaro Ny Zo Mahaolona ny zoma 16 avrila teny Antanimena Antananarivo.
Fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana ny Ong Miaro Ny Zo Mahaolona. Miompana amin’ny olona sendra ireto olona ireto, olona tsy mahafantatra ny zony, ireo tratran’ny tsindry hazolena, ireo olona tsy voahaja ny zony no h ifantohan’ny asan’ity fikambanana tsy miankina ity. « Mipetraka izahay hanampy ny olona araka ireo voatanisa ireo » hoy Jerry Randrianarisoa, filohan’ Miaro Ny Zo Mahaolona. Raha misy izany olona tratran’iray amin’ireo, dia vonon-kanampy ny Ong satria izay no anto-pisian’ny Miaro Ny Zo Mahaolona.
Betsaka ny zon’olona tsy voahaja raha ny eto Madagasikara. Ao ireo iharan’ny fanararaotana satria tsy mahalala ny lalàna. Eny amin’ny toeram-piasana dia misy ny karama tsy aloa na tara vao omena, roahana amin’ny tsy misy antony ny olona. Ao koa ny olona voaenjikenjika. Noho ny tsy fahafantarana ny zony dia midoboka any am-ponja satria tsy misy mpiaro, tsy mahafantatra izay tokony hataony.
Raha misy olona mila toro hevitra raha tratran’ireo trangan-javatra voalaza etsy ambony dia afaka manatona ny Ong Miaro Ny Zo Mahaolona.“Manampy ihany koa izahay amin’ny fametrahana fitarainana na fitoriana aza (plainte). Manana mpisolovava ny Ong. “Raha sendra mila izany ireo olona tohananay dia manana an’izany ny ong” hy ny fanamarihana nentin’ireo mpiandraikitra. Ahitana mpampianatra sy mpisolovava (avocat) ary mpahay lalàna (juriste) amin’ireo mpikambana mandrafitra ity ong iray ity araka ny nambaran’ireo mpiandraikitra.
Teo amin’ny iray volana teo izao no nitsangana ny Ong Miaro Ny Zo Mahaolona ary efa nisy ireo niantso azy. « Ary tsy ataonay ambanin-javatra ihany koa ny sosialim-bahoaka, eo ihany koa ny fanomezana fiofanana amin’ny fotoana fohy ho an’izay mila izany, mety vehivavy mitady asa… ary manasa hatrany ny tanora hanatevin-daharana ny Ong, maro ny fizarana azo atao na eo amin’ny sehatry ny fianarana izany na sehatry ny asa » hoy Rtoa Indraina Adrianjatovo Gabrielle mpanolotsaina ao amin’ny Ong.
Tsy tokony hisalasala hiantso ny Ong raha mila ny fanampian’ny Ong. 0342808331 io laharana io no ahafahana mifandray amin’izy ireo na koa manatona avy hatrany ny biraon’ny Ong eny 67Ha, Lycée privée ny Zoko